Things to consider before Buying Helmets – Gliders Helmet - Biggest Online Helmet Store in Myanmar
Cute, German - May 7, 2020
Things to consider before Buying Helmets
ကြှနျတျောတို့ Gliders မှ Sharing လုပျပေးမယျ့အကွောငျးအရာလေးကတော့ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျတဈလုံးကို ဘယျလိုရှေးခယျြဝယျယူရမလဲ ဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ ။
မိမိစီးနတေဲ့ ဆိုငျကယျတှနေဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ ဆိုငျကယျဦးထုပျတှကေို ရှာဖှဝေယျယူရတာကလှယျကူပါတယျ ။
DT တို့လို Dirt Bike တှအေတှကျ ဦးထုပျဆို full face ကိုမှ လြှာထိုးလေးနဲ့ ခပျရှညျရှညျပုံစံလေးဆိုလိုကျဖကျပွီ။
R1 တို့ CBR တို့လို SportBike တှအေတှကျဆိုလညျး ဘဲဥပုံ full face ၊ လခှေငျးအားကောငျးမယျ့ Aerodynamic structure တညျဆောကျထားတဲ့ ဦးထုပျတှကေအကောငျးဆုံးပါပဲ ။
Harley တို့ Royal Enfield တို့လို Cruiser နဲ့ Chopper တှအေတှကျဆိုရငျတော့ WWII စတိုငျလျဦးထုပျတှကေ အလိုကျဖကျဆုံးဖွဈပါတယျ ။
ကိုယျ့ဆိုငျကယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ဦးထုပျကိုရှာရတာလှယျလှယျလေးဆိုတော့ ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့ ဦးထုပျဘယျလိုရှေးမလဲ ?
ဒီနရောမှာ ပွောစရာ (4) ခကျြရှိပါတယျ …
1. အရှယျအစား (Size)
ဆိုငျကယျဦးထုပျဆိုတာ ကိုယျဆိုငျကယျစီးတိုငျး ဆောငျးထားရမယျ့ဦးထုပျပါ ။ ဒီလိုဆိုတော့ သကျတောငျ့သကျသာရှိနဖေို့လိုတာပေါ့ ၊ ဒါ့ကွောငျ့ ဦးထုပျဝယျတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ဦးခေါငျးနဲ့ အလိုကျဖကျဆုံး၊ သကျတောငျ့သကျသာအရှိဆုံး ဦးထုပျကိုရှေးခယျြဝယျယူသငျ့ပါတယျ ။
2. ပုံသဏ်ဌာနျ (Shape)
သငျ့အနနေဲ့ သကျတောငျ့သကျသာရှိဖို့အပွငျ ဦးခေါငျးနဲ့လိုကျဖကျဖို့လညျးလိုပါသေးတယျ ။ ကိုယျ့ဦးခေါငျးရဲ့ပုံသဏ်ဌာနျပျေါမူတညျပွီး Full face ရှေးမလား ၊ open face ရှေးမလား
အပုလား အရှညျလား စသညျဖွငျ့ လိုကျဖကျတဲ့ ဦးထုပျတဈလုံးကိုရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ ။
3. ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံ (Structure)
ဦးထုပျတဈလုံးရဲ့ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံဆိုတာကတော့ လဝေငျလထှေကျစနဈ၊နှဈထပျမှနျ၊spoiler စသညျ့စနဈမြားပါဝငျခွငျး၊ မပါဝငျခွငျးတို့ကိုဆိုလိုတာပါ ။ ဥပမာ - သငျက ဆိုငျကယျစီးပွီး ခရီးရှညျသှားလရှေိ့သူဆိုရငျ သငျ့ဦးထုပျမှာ လဝေငျလထှေကျစနဈပါဝငျဖို့လိုအပျပွီး ဒါမှလညျး အခြိနျကွတာနဲ့အမြှခေါငျးခြှေးထှကျခွငျး၊ပူအိုကျပွီးမူဝခွေငျးတို့ကိုကာကှယျနိုငျမှာပါ ။ နောကျပွီး သငျဟာမကျြမှနျသမားဖွဈပွီး Full Face ဦးထုပျဆောငျးခငျြတယျဆိုရငျ မကျြမှနျတပျဖို့အတှကျ space လိုအပျမှာဖွဈပွီး နှဈထပျမှနျတှနေဲ့အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး ။
4. အရညျအသှေး အသိအမှတျပွုလကျမှတျ
ဆိုငျကယျစီးရငျ ဦးထုပျဆောငျးရတဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြက ဘေးအန်တရာယျကာကှယျအရေးအတှကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျဆောငျးမယျ့ဦးထုပျက ဘယျလောကျထိအကွမျးခံပွီး ဘယျလောကျထိ ကိုယျ့ကိုကာကှယျပေးနိုငျမလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုသိဖို့ဆိုရငျတော့ ဒီဦးထုပျတှရေဲ့ နိုငျငံတကာ ဒါမှမဟုတျ ပွညျတှငျးအသိအမှတျပွုလကျမှတျတှေ ကိုကွညျ့ပွီးဆုံးဖွတျနိုငျပါတယျ ။ ဒါမှလညျး ကိုယျ့ကို ကာကှယျပေးမယျ့ဦးထုပျတဈလုံးကို အကောငျးဆုံးရှေးခယျြဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ ။
ဒီလောကျဆို ကိုယျနဲ့လိုကျဖကျမယျ့ ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျတဈလုံးဝယျဖို့ စဉျးစားဆုံးဖွတျနိုငျမယျ့အခကျြအလကျတှသေိလောကျပွီလို့ထငျပါတယျ ။ သငျဟာ ဆိုငျကယျခရဇေီတဈယောကျ ဒါမှမဟုတျ ဆိုငျကယျဦးထုပျတှကေိုအလေးပေးပွီး အသုံးပွုနသေူတဈယောကျဆိုရငျတော့ ယခုလို ဗဟုသုတရဖှယျအကွောငျးအရာတှကေို ဆကျလကျဖတျရှု့ဖို့ Gliders ကို like လုပျထားလိုကျပါ ။
ကျွန်တော်တို့ Gliders မှ Sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်တစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရမလဲ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိစီးနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တွေကို ရှာဖွေဝယ်ယူရတာကလွယ်ကူပါတယ် ။
DT တို့လို Dirt Bike တွေအတွက် ဦးထုပ်ဆို full face ကိုမှ လျှာထိုးလေးနဲ့ ခပ်ရှည်ရှည်ပုံစံလေးဆိုလိုက်ဖက်ပြီ။
R1 တို့ CBR တို့လို SportBike တွေအတွက်ဆိုလည်း ဘဲဥပုံ full face ၊ လေခွင်းအားကောင်းမယ့် Aerodynamic structure တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဦးထုပ်တွေကအကောင်းဆုံးပါပဲ ။
Harley တို့ Royal Enfield တို့လို Cruiser နဲ့ Chopper တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ WWII စတိုင်လ်ဦးထုပ်တွေက အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်ကိုရှာရတာလွယ်လွယ်လေးဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်ဘယ်လိုရွေးမလဲ ?
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာ (4) ချက်ရှိပါတယ် …
1. အရွယ်အစား (Size)
ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆိုတာ ကိုယ်ဆိုင်ကယ်စီးတိုင်း ဆောင်းထားရမယ့်ဦးထုပ်ပါ ။ ဒီလိုဆိုတော့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ ၊ ဒါ့ကြောင့် ဦးထုပ်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး၊ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံး ဦးထုပ်ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ် ။
2. ပုံသဏ္ဌာန် (Shape)
သင့်အနေနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့အပြင် ဦးခေါင်းနဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လည်းလိုပါသေးတယ် ။ ကိုယ့်ဦးခေါင်းရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်မူတည်ပြီး Full face ရွေးမလား ၊ open face ရွေးမလား
အပုလား အရှည်လား စသည်ဖြင့် လိုက်ဖက်တဲ့ ဦးထုပ်တစ်လုံးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ။
3. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (Structure)
ဦးထုပ်တစ်လုံးရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုတာကတော့ လေ၀င်လေထွက်စနစ်၊နှစ်ထပ်မှန်၊spoiler စသည့်စနစ်များပါဝင်ခြင်း၊ မပါဝင်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုတာပါ ။ ဥပမာ - သင်က ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ခရီးရှည်သွားလေ့ရှိသူဆိုရင် သင့်ဦးထုပ်မှာ လေ၀င်လေထွက်စနစ်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီး ဒါမှလည်း အချိန်ကြတာနဲ့အမျှခေါင်းချွေးထွက်ခြင်း၊ပူအိုက်ပြီးမူဝေခြင်းတို့ကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါ ။ နောက်ပြီး သင်ဟာမျက်မှန်သမားဖြစ်ပြီး Full Face ဦးထုပ်ဆောင်းချင်တယ်ဆိုရင် မျက်မှန်တပ်ဖို့အတွက် space လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်မှန်တွေနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး ။
4. အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဦးထုပ်ဆောင်းရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဆောင်းမယ့်ဦးထုပ်က ဘယ်လောက်ထိအကြမ်းခံပြီး ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုသိဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီဦးထုပ်တွေရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဒါမှမဟုတ် ပြည်တွင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ကို ကာကွယ်ပေးမယ့်ဦးထုပ်တစ်လုံးကို အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလောက်ဆို ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့်အချက်အလက်တွေသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ။ သင်ဟာ ဆိုင်ကယ်ခရေဇီတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တွေကိုအလေးပေးပြီး အသုံးပြုနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ယခုလို ဗဟုသုတရဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ဖို့ Gliders ကို like လုပ်ထားလိုက်ပါ ။